C/qaadir Jiiroow oo ku geeriyooday Muqdisho Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
C/qaadir Jiiroow oo ku geeriyooday Muqdisho Allaha u naxariistee waxaa Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho xalay ku geeriyooday xili dambe C/qaadir Jiiroow Sharmaarke oo mar soo noqday Agaasimihii Idaacadii Horn Afric.
Jiiroow ayaa maalmihii u dambeeyay xanuusanayay oo waxaa haysay xaalad caafimaad daro sida ay inoo sheegeen Dhaqaatiirtii ku howlaned xaaladiisa caafimaad.
Maamulada iyo dhaqaalaha Warbaahinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan Ehelada, asxaabtii iyo Dhamaan Umada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday rug cadaagii bahda Saxaafadda MR C/qaadir, waxaana ay leeyihiin allaha u naxariisto oo janada haka waraabiyoo.
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan maydkiisa laga qaado Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo la aaso, iyadoo ka qeyb galka aaskiisa ay isku diyaarinayaan dad badan oo Saxafiyiinta ay ka mid yihiin.
C/qaadir Jiiroow Sharmaarke oo hada ka shaqeynayay Idaacadda Mustaqbal ayaa waxa uu kasoo shaqeeyay Radio Muqdisho xiligii dowladii Milatariga, isaga oo sidoo kale soo noqday Agaasimihii Idaacadii ay Shabaab bililiqeysteen ee Horn Afric.